abashayeli Abaningi bajwayelene namazwi inkinga, lapho izinga ukunxenxa kuyinto vibration. Izizathu zalokhu mkhuba - mass. Ngokuvamile ukufuna emthonjeni kungehlisa ngisho umshayeli crazy. Ake sibheke kwezimbangela eziyinhloko shaking, bobabili bafuna ukungena emotweni wazola futhi abushelelezi. Ngo-75% amacala, inkinga ibanjiwe njalo iqedwe, futhi umnikazi imoto ungakwazi futhi uzizwe ukhululekile futhi ukhululekile.
Vibration: musa ukuwela ukucindezeleka
Uma imoto unikina, futhi lapho umthombo Akucaci, ningatatazeli. Uma imoto isukela eminyakeni 3 kuya 5 Ngaphezu kwalokho, cishe, yimuphi umakhi izingxenye wasebenza umthombo eyabelwe futhi zigqokwe. Ngenxa yensimbi "amahhashi" ukukhombisa umhlaba mdala kangakanani. Akubalulekile ukushayela uma ithola shaking imoto SRT ukuze kuhlonzwe - imbangela ungabheka ngokwakho.
Shakes amasondo ayo ngesilinganiso isethi
Kaningi, lapho ushayela ku amasondo ayo, a vibration eqinile ngesilinganiso isethi. Ekuqaleni, kuba kancane obonakalayo, kodwa kuba obuphathekayo ngokuhamba kwesikhathi. It kungasilimaza kakhulu nomthofu engozini.
Into yokuqala udinga ukuhlola sekulinganisa isondo. Ukuze wenze lokhu, ungaya isondo eliseduze. Uma isondo yakho okungenakho ukulinganisela, ke ingenye yezizathu ezidume kakhulu shaking ngesilinganiso isethi. Ekuqedeni inkinga ngeke ezibizayo. Kwesinye isikhathi disc ivimbekile ukungcola noma iqhwa, bese lezi amabhithi kungenzeka futhi ayeke. Nquma khona ukungcola esimweni amasondo ingxubevange silula, futhi steel, lapho izimbobo ezincane, kunzima ukupholisa. Ukungcola iqoqa ngaphakathi engxenyeni.
Ayikho amathayi noma amasondo musa ihluke ukuphelela ngokuya geometry kanye nokusungulwa.
Ngakho, ngenxa uquqaba ezahlukene ezingxenyeni ezahlukene isondo, izindawo lapho isisindo ngeke donsa oluvala amasondo isondo. Ngesivinini ibutho idluliselwa induku ke - ku amasondo ayo.
Kubalulekile ngezikhathi okulinganisa. Ikakhulukazi ngemva kokushintsha amathayi noma beshayela. Nale nqubo kungenzeka ukuvumelanisa amasondo iphuzu ngalinye mass. Ukusebenzisa imoto nge amasondo Unbalanced kungabangela ziwohloke masinyane chassis kanye nokumisa, futhi ukulungisa le nkinga iyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho.
Uma sinqamukile ibhalansi
Izimpawu main - hhayi banikine enamandla wonke imoto ngesivinini isethi. Uma ungazange ushintshe isondo, uma amasondo ahambelana kahle futhi icocekile ukushayela isitayela, kodwa konke lokhu, kwaba khona vibration ongaziwa ngesilinganiso isethi, inkinga itholakala ngokunembile kuleli.
Akufanele sicabange ukuthi uma ushaya kuthiwa wazizwa ku amasondo ayo, udinga nje ukuba silinganisele amasondo phambi. Kungcono ukwenza lo msebenzi ngezinyawo ezine.
isondo ohlanekezelwe noma ezilimele
Ngokuvamile emva hhayi izindlela zokuxilonga ungakwazi ukuthola esinye isizathu ukushaya - isondo Curves. Kungaba ukuveza noma isondo Uchwepheshe fitting othini ekhethekile. Uma ngesikhathi ukuhlola isondo kwi ukuma test, kuzuba, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba kuyima. Kubalulekile ukubona ukuthi ngabe disc kuzuba kanye ukukhathala. Jumps? Fault drive, akukho? Okukushoyo esikhundleni isondo.
vibration Ngaphansi ngesilinganiso isethi kwenzeka ngenxa ingcindezi enganele.
It sitholakale kalula kakhulu futhi iqedwe.
yasibamba alithembekile amasondo
Le nkinga futhi kulula ukususa futhi ukuxilonga. Lesi isizathu esilula, kodwa kuyingozi kakhulu. Babhokile Ngokuphikisa ezingasetshenziswa esikhululekile ngisho isondo elilodwa, futhi lokho anele okuvela shaking. Uma inkinga is hhayi iqedwe ngesikhathi, kungase kube nezimo eziphuthumayo. Uma isondo lindiza ngenkathi ushayela, ukukhanda ngeke neze eqolo - kufanele esikhundleni disc kanye ihabhu, ukubopha disc.
Symptomatology kulesi simo kuyafana vibration ngenxa isondo noma akwazi ukugcina insaliwe. Kodwa lapha kukhona Ukuphinda, nakuba ayengafiki ngaso sonke ngesivinini.
Uma isondo isethwe zibheke ohlangothini olungafanele, liphinde yezimbangela beats edabukisayo. Ukulungisa la engeli - inqubo ebalulekile ngemuva umzimba vibration ukuthola. Yini engenziwa ukuze kuqedwe? Lungisa kusetshenziswe ukuqondanisa othini ekhethekile. It is ibuye Kunconywa ukuba esikhundleni amathayi, uma kuba sobala ukuthi akulungile ukugqoka.
Hlola ukumiswa futhi egijima igiya
Vibration ngesilinganiso isethi bungase bubangelwe bafake zemvelo ukumelana noma ukushaqeka ezidayiswayo. Ukumiswa uyayeka ukusebenza kahle, okuyinto yezimbangela yenkinga. Ikakhulukazi kungabonwa emigwaqeni anolaka noma uma ushayela ngejubane.
Omunye ethandwa isizathu jolts - eselulelwe nithela ngaphambili. Le nto zingatholakala phezulu, ngaphezu bumper. Futhi phambi kwakhe uhlole ngaphansi hood. Uma wakwazi ukuthola eziveza ezigugile kufanele esikhundleni sakhe, bese inkinga ziyoxazululwa.
Ball emalungeni ezimweni eziningi uzokhathala ngenxa ukunyakaza emigwaqweni ukhwaliti ongaphakeme. Ngo izimo zezwe lethu, lezi zingxenye kumele ushintshe kaningi impela. Uma uthola igebe Ukukhweza bese, mhlawumbe, esikhundleni ngeke ukwazi ukwenza induduzo.
Hlola bese uqedela esikhundleni amathiphu of ayo okusalungiswa, uma kunesidingo. Ngokuhamba kwesikhathi, leli washi livela backlash ngenxa ukugqoka. Ngenxa yalesi ithiphu ongenza imoto isondo Ukujikeleza ngokulinganisa. amathiphu Wear kubangela shaking.
Vibration ngesilinganiso isethi
Kuyinto esabekayo, ikakhulukazi lapho isidingo ukusheshisa okusheshayo, isibonelo, uma ufuna dlula esinye imoto. Ngokuvamile, uma ucindezela ukushesha isinyathelo siphela choppy futhi engalingani. Ukuze uphethwe yini kudinga a izinyathelo ezilula ezimbalwa.
Hlola izinga namafutha PPC. Ngingalindele, ezingeni eliphansi uwoyela kubangela vibration futhi shaking ukuhlakazeka. Futhi, umshini angakwazi kakhulu ukulahlekelwa ku izici ashukumisayo. Jerks uma ucindezela isinyathelo namafutha - kungaba futhi ngenxa yokuntuleka uwoyela.
A isihlungi ezingcolile kubangela automatic transmission ezihlukahlukene nemiphumela edabukisayo. Ungenza esikhundleni ngezandla zabo noma ukusebenzisa amasevisi ongoti.
Igugile bendiza kushaft - ke yibhange vibration lizwakale imoto ngesilinganiso isethi. indawo Lapha sengozini - ukuwela. Uma kudingeka, esikhundleni ingxenye, kungenjalo kungaholela umonakalo ngaphezulu.
Futhi, inkathazo elinjalo kungadalwa operation engalingani injini. Kuvamile lokhu ngemva ukulungiswa. Ngezinye izikhathi ochwepheshe abavela esiteshini inkonzo nje ukhohlwe ukwenza okulinganisa we crankshaft futhi ligcina uthi lokuphotha luzungeza. Esinye isizathu - carburetor ngokungalungile kushintshwe.
Washa imicamelo injini, gearbox nezinye izizathu
Lena enye iqembu kungenzeka yezizathu, ngenxa okuyinto umshini angakwazi shake ukuhlakazeka. Zonke lezi zinkinga singenzeka ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Naprmer, ngenxa survey Kutholwe ukwehluleka omunye ezihlalweni samandla iyunithi. Kulula ukuthola - Yandisa isivinini injini ngesikhathi okuvela kunyakaza.
Enye vibration umzimba ngesikhathi ukusheshisa 80km / h ukuze 100km / hr singenzeka for eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa nge PPC. Hlola lo mbono silula. Ncoma esheshisa mayelana 85 km / h, bese ngawakhamela isinyathelo bamba futhi nizibhale ukuziphatha umshini. Jikela igiya lwesithathu nokukhululwa bamba. Ukusheshisa kusuka km 50 ekudluliselweni zokugcina.
Uma uhlobo beat ngeke kushintshe phakathi zonke lezi imisebenzi, i-CPT Akunakusolwa. Uma vibration ezingeni ukwanda uma uxhumeke bhokisi ngalesosikhathi ungahlola ukuthi naye.
Le ndlela kufanelekile echazayo kanye automatic transmission. Endabeni umshini ngesivinini mayelana 90 km / h ku ibhokisi ukufaka 3.2, D, N, bese ulandela umsebenzi ukudluliswa othomathikhi futhi imoto. Buka vibration. Ngokuvamile, beat ibhokisi iwayini incane, kodwa umkhuba libonisa ukuthi lokhu Kungenzeka.
Yini enye ukuba banake?
Vibration ngesilinganiso isethi kungenzeka wazizwa ngenxa yasibamba injini and qeda uhlelo imininingwane alithembekile. Kungcono ukwenza lo isheke esikhungweni, bese injini ingezwakali. Futhi, zikhona izimo lapho kuzamazama kubangela ezilimele kurediyetha fan.
Okulandelayo, hlola nezinamathiselo. Ngokuvamile, inkinga ingaxazululwa esikhundleni amabhande nom izipilingi ngokulingene. Ungabi kahle ukuhlola kubhasikidi bamba ligcina uthi lokuphotha luzungeza. Lokhu kungenziwa ngendlela elandelayo. Sicindezeleke bamba bese ukuhambisa isigwedlo isikhethi ku gear kuqala. Okulandelayo, qala injini bese ulinda imizuzwana embalwa. Khona-ke isigwedlo e hlangothi, unyawo esuswa isinyathelo. Vibration sisekhona? Bheka yenkinga ligcina uthi lokuphotha luzungeza kanye nobhasikidi bamba.
CV Amalunga e enama-asi phambi
Lokhu, nakuba ayengafiki isizathu njengoba ethandwa, kodwa kunalokho endaweni ababuthakathaka, ngenxa lapho vibration ngesikhathi isethi isivinini - into njalo. abashayeli abanolwazi yanconywa ukuqala ukuxilongwa kusuka ukuthi indlela. Inqubo kufanele lifake phakathi isheke ethintekayo. Uma kukhona imihuzuko - buxhomeke ka alinganayo emincane ngaphansi esikhundleni. Kungcono esikhundleni lento ngazimbili.
Ngakho, phakathi kwezimbangela ezivame bungabonakala axube amasondo, ukubopha akwazi ukugcina eqoshiwe ababuthakathaka, zikhubazekile drive shaft, njalo Isivinini amalunga omzimba, isondo amabombo.
Vibration kwenzeka ngesikhathi ukusheshisa kunoma yini. Ziningi izizathu ezabangela lokho. Kodwa uma uzama, ungase uzithole hhayi ukukhokhela izinsiza zokuxilonga iziteshi. Kodwa uma ngokungazelelwe ungayiqondi enawe, ungayithumeli wahlehlisa isinqumo unomphela. Lokhu kuholela nemiphumela emibi. Nge izinyathelo ezilula, wena nakanjani ngeke bathole izimbangela vibration emotweni yakhe futhi akuqede. Eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa sina, ngoba ukungayinaki le nkinga kungase kubangele ingozi.
Lokotskaya Republic - ikhasi impikiswano lweMpi Enkulu
Indlela ukulungiselela sokubelethisa wesibeletho. ngezindlela ezahlukene